Oke Ochicho - part 1
Oke Ochicho - part 3
Okuko Igbo - part 1
Akwa Nwanyi Ajadu - part 1
Nwanyi onwu gburu di ya ewere la ihe nile ya na di ya kpatara nye nwanne di ya nwoke nke bu zi di ya kita. Nwanne di ya were mee ihe ka osiri me. Nwayi ajadu wee beere Chukwu akwa. Nwanne di ya chezoro na Chukwu bu di nwanyi ajadu.
Akwa Nwanyi Ajadu - part 2
Adaure - part 1
Adaure wu onye ime ezi bi la obodoya Mbano. Okwu onu ya na omume wu ka osiri mara. Mana ndi enyi ya nwanyi bi la city abiala kporo ya ga city ka ha kuziere ya ka oge esi were ahu ya were na akpata ego na aka umo nwoke. Mmadu eji imi ahu uzo? Ngwa lee Adaure lee ndu city.
Adaure - part 2
Akalaogheli - part 1
John ana aga ghari na ebiri ummu nne ya ego ka owere bido business. Nka awughi nke mbu ma obu nke abua on�ebiri ha ego maka ime business. Umunne John ebi nye ya ego. John ewere ego enyere ya were mee ihe ochoro ime��
Akalaogheli - part 2
Nwanyi Murano - part 1
Nwanyi Murano - part 2
Eze Ebu N'afo - part 1
Igwe enwehi nwa. Ndi ichie du ru igwe odu si ya ga luo nwanyi ozo ka omutara ya nwa. Nwunye igwe kwere na obu ihe igwe kwesiri ime. Mana igwe ekweghi eme nke ahu. Onwere okwukwe na nwunye ya ga amu tara ya nwa. Le zie etu ihe siri hazie onweya.
Eze Ebu N'afo - part 2
Onye Aghana Nwanneya - part 1
Akuko ije ndi nne nwanyi choro ibi ndu okoso. Nani mmanya na igba egwu wu ihe ha choro ime. Tinyere ya umu agogho wu ndi nnapu ego. Ndi di ha na ndi enyi ha nwoke aga emezi gini?
Onye Aghana Nwanneya - part 2
Nurse Eliza - part 1
Nurse Eliza - part 2
Ukwu Nwanyi Owerri - part 1
Mkpari amu nke ndi umu nwoke efulefu na enweghi aka oru, mana ha ejighi anya ahu nwayi ahu di mma. Muru nu amu biko.
Ukwu Nwanyi Owerri - part 2
Ada Owerri - part 1